TV Movie – MMANIME
Eden of the East Movie II: Paradise Lost (Eden of the East [serie] နဲ့ Movie I ကိုကြည့်ထားဖို့လိုသည်) Takizawa က Saki နဲ့Tokyo ကနေလေယာဉ်နဲ့ပြန်လာတဲ့နောက် Takizawa တစ်​ယောက် ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီးရဲ့နောက်လိုက်တွေခေါ်ရာကိုပါသွားပြန်တယ် Takizawa ကဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တရားမဝင်သားလား ဒါမှမဟုတ် တောင်းဆိုချက်အရဖြစ်နေတာလားဆိုတဲ့အချက်ကလည်း သေချာမသိကြသေးပါဘူး နောက်ထပ်ရှာဖွေစရာရှိလာတာကတော့ Takizawa က သူ့အမေကို တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပါဘဲ ဒီလိုနဲ့ Saki က Takizawa ကဗုန်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ကြောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက် Takizawa ရဲ့အမေကိုရှာဖို့ဇာတ်လမ်းစပါတော့တယ် #KichiroANIME
Clannad Movie Clannad Movieဟာ "Clannad"စီးရီးပြီး "Clannad After Story"ရဲ့ အပိုင်း ၁၈ ဝန်းကျင်ကာလကို ရိုက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်မယ့်သူဟာ အနည်းဆုံး "Clannad After Story"ကို အပိုင်း ၁၈အထိ အနည်းဆုံးကြည့်ပြီးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ စီးရီးကို အစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူဟာ ဒီဇာတ်ကားကို မဖြစ်မနေ ကြည့်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြည့်ချင်တဲ့သူရှိပါက ကြည့်ရအဆင်ပြေစေဖို့ ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ စီးရီးထဲက အဓိကဇာတ်ဆောင် "အိုကဇာခီ တိုမိုယ"ရဲ့ရှုထောင့်ကို အသားပေးထားပြီး "The Motion Picture"ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲ အတိတ်ကိုပြန်တွေးသလိုနဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
You are Umasou ဇာတ္​လမ္​းအၫႊန္​း ~~~~~~~~~~~~~~~~~ အပင္​စားဒိုင္​ႏို​ေဆာ အ​ေမက​ေန ​ေမြးစားၿပီး ပ်ိဳး​ေထာင္​​ေပးခဲ့တဲ့ အိမ္​​ေျပး အသားစားဒိုင္​ႏို​ေဆာ "ဟတ္​တ္​"... လမ္​းမွာ​ေတြ႔တဲ့ ဥက​ ​ေပါက္​ဖြားလာခဲ့တဲ့ အပင္​စားဒိုင္​ႏို​ေဆာက​ေလးကို စားဖို႔ ၾကံစည္​ခဲ့​ေပမဲ့ က​ေလးရဲ႕ "အ​ေဖ"လို႔ အထင္​လြဲျခင္​းကို ခံလိုက္​ရတဲ့ သူ... က​ေလးကို ႀကီးလာမွစားမယ္​ဆိုတဲ့အၾကံနဲ႔ ​ေမြးစားထား​ေပမဲ့ တစ္​စစနဲ႔ သံ​ေယာဇဥ္​တြယ္​လာတဲ့အခါ... ​ "ဟတ္​တ္​"တစ္​​ေယာက္​ အပင္​စားဒိုင္​ႏို​ေဆာ​ေလးကို စားရက္​ႏိုင္​ပါ့မလား... အသားစားမ်ိဳးႏြယ္​ ဒိုင္​ႏို​ေဆာနဲ႔ အပင္​စားမ်ိဳးႏြယ္​ ဒိုင္​ႏို​ေဆာ​ေလးတို႔အၾကားက မိဘနဲ႔ သားသမီး ဆက္​ဆံ​ေရးဟာ ​ေရ႐ွည္တည္​ျမဲႏိုင္​ပါ့မလား.... ပင္​ကိုယ္​စ႐ိုက္​ သဘာဝကိုက မတူညီကြဲျပားတဲ့ သူတို႔မိသားစု​ေလးကို ဘယ္​လိုကံၾကမၼာဆိုး​ေတြက ဝင္​႐ိုက္​ခတ္လာမွာလဲ... "ဟတ္​တ္​"တစ္​​ေယာက္​ သူ႔ကို ​ေမြးစားခဲ့တဲ့ ​အ​ေမ့ဆီက ဘယ္​လိုအ​ေၾကာင္​း​ေၾကာင္​း​ေတြ​ေၾကာင္​့ ထြက္​​ေျပးလာခဲ့တာလဲ...စတဲ့ အ​ေၾကာင္​းအရာ​ေတြကို ၅၂၈ဆိုတဲ့ ​မိဘ​ေမတၱာတရားရဲ႕​ေခါင္​းစဥ္​​ေအာက္​မွာ လွလွပပနဲ႔ ​ေပါ့​ေပါ့ပါးပါး တင္​ဆက္​​ေပးထားတဲ့ ဇာတ္​လမ္​း​ေလးတစ္​ပုဒ္​ပါပဲ။
Weathering with You (2019) "ေတာက္ပတဲ့ေနမင္းႀကီးကိုမေတြ႔ရေတာ့ေရာဘာျဖစ္လဲ? ျပာလဲ့လဲ့မိုးေကာင္ကင္ထက္ နင့္ကိုပဲငါလိုခ်င္တယ္ ရာသီဥတုၾကမ္းခ်င္ၾကမ္းပါေစအေရးမႀကီးဘူး" လွပတဲ့စကားလံုးေတြနဲ႔တင္ဆက္ထားတဲ့ ဒီanimeဟာ Your Nameကိုထုတ္လုပ္ေပးခဲ့တဲ့ CoMix Wave Filmsရဲ႕လက္ရာတစ္ပုဒ္ပါ ဂ်ပန္မွာ ယန္း၁၄.၀၆သန္းအထိဝင္ေငြရခဲ့ၿပီး တစ္ကမာၻလံုးမွာျပသခဲ့တာကေန ၁၉၂.၇သန္းေဒၚလာရခဲ့တဲ့အထိလူႀကိဳက္မ်ားထားတဲ့anime႐ုပ္႐ွင္ေလးပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေလးHodaka Morishimaဟာ သူ႔ရဲ႕ကြၽန္းကေနထြက္လာၿပီးတိုက်ိဳၿမိဳ႕ေပၚကိုတက္လာခဲ့ပါတယ္ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ဝင္ေငြ႐ွာဖို႔နဲ႔ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြေၾကာင့္ပါ သူ႔ရဲ႕အနာဂတ္ေတြကိုပုံေဖာ္ဖို႔သြားတဲ့အဲ့ဒီၿမိဳ႕ႀကီးက ပုံမွန္မဟုတ္ပဲ ေန႔တိုင္းလိုလို မိုးအုံ႔ မိုးရြာေနတတ္ပါတယ္ သူဟာအဲ့မွာေနရင္းနဲ႔ဘယ္ကမွလည္းအဆက္အသြယ္မရပဲ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေတာ့ေနာက္ဆံုးမွာ ထူးဆန္းေထြလာမဂၢဇင္းေရးတဲ့အလုပ္ကိုသူရသြားခဲ့တယ္ တစ္ေန႔မွာ Hoda က႐ႈပ္ယွက္ခပ္ေနတဲ့လမ္းေထာင့္တစ္ေနရာက လူေတြၾကားထဲကမွ Hina ဆိုတဲ့မိန္းကေလးကိုသူသတိျပဳမိသြားပါတယ္ ဒီမိန္းကေလးက ေတာက္ပၿပီး စိတ္ဓာတ္ျပင္းျပတဲ့သူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူ႔မွာထူးျခားစြမ္းအင္လည္း႐ွိေနပါေသးတယ္ သူ႔ရဲ႕အစြမ္းကေတာ့ ဒီလိုမိုးသည္းၿပီးအံု႔မိႈင္းမိႈင္းျဖစ္ေနတဲ့တိုက်ိဳၿမိဳ႕ႀကီးကို မိုးေတြကိုတိတ္ တိမ္စင္ေတြကိုဖယ္႐ွားၿပီး အလင္းဓာတ္ကိုေဆာင္ေပးႏိုင္သူေပါ့........ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါဦး IMDb 7.6/10 Rotten tomatoes 91%
Fate/Stay Night: Heaven’s Feel II. Lost Butterfly Overview Theatrical-release adaptation of the visual novel "Fate/stay night", following the third and final route. (Part2ofatrilogy.)Fate/stay night:Heaven's FeelHF routeကတော့ Sakuraနဲ့shirouရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုအဓိကထားပါတယ်။Routeသုံးခုထဲမှာမှ HF routeဟာ အရှည်လျားဆုံးနဲ့ အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပြီး အရင်routeမှာမဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့loreတွေကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။Horrorဆန်တဲ့ plotတွေနဲ့ HF routeဟာ FSN storylineရဲ့ dark sideပဲဖြစ်ပါတယ်။Fourth warအပြီးမှာ Matou Zoukenဟာ Kiritsugu ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့ grailရဲ့အပိုင်းအစလေးကို sakuraထဲထည့်တဲ့ wormကိုကျွေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ sakuraဟာholy grailရဲ့gateတခုဖြစ်သွားပြီး black shadowကိုထုတ်ကာ လူတွေကိုစား servantတွေကို black servantတွေပြောင်းလိုက်နဲ့ သောင်းကျန်းပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုသိလိုက်ရတဲ့ shirouဟာ သူ့အဖေတုန်းကလိုပဲ ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ရပါတယ်။ လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ သူချစ်တဲ့သူကိုသတ်မလား ...
IMDB: 6/10 45 votes
Code Geass: Akito the Exiled 5: To Beloved Ones Code Geass: Akito the Exiled (コードギアス 亡国のアキト, Kōdo Giasu Bōkoku no Akito) ခဏနေ အပိုင်း (၁) တင်ပါမယ် Genre: Alternate history, mecha, military Code Geassဆိုတာကတော့ Old but Gold Anime seriesတစ်ခုပါ။IMDb rating 8.6/10ရရှိထားပြီး Main seriesမှာSeason2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Manga ပေါင်းများစွာ Game နဲ့ OVAအများအပြားထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Anime တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ OVAတွေထဲမှာမှ “Akito the exiled”ဆိုတဲ့ OVA seriesကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Code geassရဲ့Main storyဖြစ်တဲ့seriesဟာ October6,2006ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး “Akito the exiled” OVA ...
Code Geass: Akito the Exiled 4: Memories of Hatred Code Geass: Akito the Exiled (コードギアス 亡国のアキト, Kōdo Giasu Bōkoku no Akito) ခဏနေ အပိုင်း (၁) တင်ပါမယ် Genre: Alternate history, mecha, military Code Geassဆိုတာကတော့ Old but Gold Anime seriesတစ်ခုပါ။IMDb rating 8.6/10ရရှိထားပြီး Main seriesမှာSeason2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Manga ပေါင်းများစွာ Game နဲ့ OVAအများအပြားထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Anime တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ OVAတွေထဲမှာမှ “Akito the exiled”ဆိုတဲ့ OVA seriesကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Code geassရဲ့Main storyဖြစ်တဲ့seriesဟာ October6,2006ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး “Akito the exiled” OVA ...
Code Geass: Akito the Exiled 3: The Brightness Falls Code Geass: Akito the Exiled (コードギアス 亡国のアキト, Kōdo Giasu Bōkoku no Akito) ခဏနေ အပိုင်း (၁) တင်ပါမယ် Genre: Alternate history, mecha, military Code Geassဆိုတာကတော့ Old but Gold Anime seriesတစ်ခုပါ။IMDb rating 8.6/10ရရှိထားပြီး Main seriesမှာSeason2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Manga ပေါင်းများစွာ Game နဲ့ OVAအများအပြားထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Anime တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ OVAတွေထဲမှာမှ “Akito the exiled”ဆိုတဲ့ OVA seriesကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Code geassရဲ့Main storyဖြစ်တဲ့seriesဟာ October6,2006ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး “Akito the exiled” OVA ...
Code Geass: Akito the Exiled 2: The Wyvern Divided Code Geass: Akito the Exiled (コードギアス 亡国のアキト, Kōdo Giasu Bōkoku no Akito) ခဏနေ အပိုင်း (၁) တင်ပါမယ် Genre: Alternate history, mecha, military Code Geassဆိုတာကတော့ Old but Gold Anime seriesတစ်ခုပါ။IMDb rating 8.6/10ရရှိထားပြီး Main seriesမှာSeason2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Manga ပေါင်းများစွာ Game နဲ့ OVAအများအပြားထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Anime တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ OVAတွေထဲမှာမှ “Akito the exiled”ဆိုတဲ့ OVA seriesကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Code geassရဲ့Main storyဖြစ်တဲ့seriesဟာ October6,2006ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး “Akito the exiled” OVA ...
Code Geass: Akito the Exiled 1: The Wyvern Arrives Code Geass: Akito the Exiled (コードギアス 亡国のアキト, Kōdo Giasu Bōkoku no Akito) ခဏနေ အပိုင်း (၁) တင်ပါမယ် Genre: Alternate history, mecha, military Code Geassဆိုတာကတော့ Old but Gold Anime seriesတစ်ခုပါ။IMDb rating 8.6/10ရရှိထားပြီး Main seriesမှာSeason2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။ Manga ပေါင်းများစွာ Game နဲ့ OVAအများအပြားထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး Anime တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့အခု ထွက်ရှိထားတဲ့ OVAတွေထဲမှာမှ "Akito the exiled"ဆိုတဲ့ OVA seriesကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Code geassရဲ့Main storyဖြစ်တဲ့seriesဟာ October6,2006ခုနှစ်မှာစတင်ထွက်ရှိခဲ့ပြီး "Akito the exiled" OVA ...
IMDB: 6/10 17 votes
KiKi’s Delivery Service Kikiကားေလးကေတာ့90bornေတြဆိုရင္ျမဝတီကေနမိုးပ်ံမေလးကိကိဆိုၿပီးျပခဲ့လို႔မိုးပ်ံမေလးလို႔ပဲမွတ္ထားမယ္ထင္ပါတယ္ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့Studioghibliကထြက္တဲ့အထဲမွာဒုတိယေျမာက္ၾကည့္ခဲ့ဖူးတဲ့ကားပါပထမကားက totoroဒီကားမၾကည့္ခင္အထိဂ်ပန္animeဆိုရင္ႀကိဳက္ကိုမႀကိဳက္တာဗ်အေနာက္တိုင္းကာတြန္းေတြပဲႀကိဳက္ခဲ့တဲ့အရြယ္ေပါ့ႁခြင္းခ်က္အေနနဲ႔Yaibaကေတာ့ႀကိဳက္ခဲ့တယ္Totoroေတာင္မွၾကည့္တုန္းကေၾကာက္မိတာကမ်ားေနတယ္ေၾကာင္ဘတ္စ္ကားပံုႀကီးဆိုအေသေၾကာက္တာ????ဒီကားၾကည့္ေတာ့မွကေလးအရြယ္မွစၿပီးဂ်ပန္animeေတြႀကိဳက္လာေကာေနာက္ေတာ့Grave of firefliesတို႔ဘာတို႔ေတြပါဆက္ၾကည့္တာFirefliesကေတာ့ႀကိဳက္ေပမယ့္ဘယ္ေတာ့မွျပန္မၾကည့္ေတာ့တဲ့ကားထဲေတာင္ပါတယ္အခုghibliအတြက္ဘာသာျပန္ဖို႔ကားေတြခြဲေတာ့ေတာင္အဲ့ကားကိုဘယ္သူမွဘာသာျပန္ဖို႔မယူၾကဘူးဘာသာျပန္ဖို႔အတြက္ျပန္ေတာင္မၾကည့္ခ်င္ဘူးေလထားပါေလစကားေတြေဘးေရာက္ကုန္ၿပီဇာတ္လမ္းအၫႊန္းကိုေျပာျပပါမယ္ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့တအားေျပာရင္spoilပါမွာစိုးလို႔ အတိုဆံုးခ်ံဳ႕ေျပာပါ့မယ္ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ စုန္းအႏြယ္ဝင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့စုန္းမေလးKiKiက သူတို႔ရဲ႕႐ိုးရာအရလြတ္လပ္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ KiKiကလူသားေတြနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြေနဖို႔ဆံုးျဖတ္ရင္းလူေတြေနတဲ့ေနရာကိုသြားၿပီး အလုပ္လိုက္ေလွ်ာက္ပါတယ္ဒါေပမယ့္ အဲ့ေခတ္အခါအရ စုန္းမဆိုရင္အလုပ္ခန္႔ဖို႔မေျပာနဲ႔ ပတ္ေတာင္ပတ္သက္ခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူးဒါေပမယ့္ စိတ္ရင္းေကာင္းတဲ့မုန္႔ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ကေတာ့KiKiကိုအလုပ္လုပ္ဖို႔ရယ္ ေနစရာ စားစရာအျပည့္ေထာက္ပံ့ပါတယ္KiKiရဲ႕အလုပ္ကေတာ့ အဲ့ဆိုင္ကမုန္႔ေတြကိုသူ႔ရဲ႕တံျမတ္စည္း႐ိုးႀကီးကိုစီးၿပီး မွားထားတဲ့အိမ္ေတြကိုအျမန္ဆံုးလိုက္ပို႔ရတဲ့ deliveryဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုပါပဲKiKiကအလုပ္လည္းလုပ္သလို လူေတြနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ေနရင္း ဘယ္လိုအလြဲေတြျဖစ္လာမလဲဆိုတာကေတာ့ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ……. IMDb 7.8/10Rotten tomatoes 97%
IMDB: 7.8/10 251514 votes
Typhoo Noruda(2015) ဒီကားလေးကတော့ wearthing with you ပုံစံမျိုးပါဘဲမတူတာကတော့ ကောင်မလေးကမှုန်တိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပြီး ၂၄ မိနစ်ထဲပါတဲ့ Movie ဖြစ်နေတာပါဘဲ တစ်နေ့မှာ Azuma ဆိုတဲ့ကောင်လေးကအဝတ်ဗလာနဲ့အဲ့ကောင်မလေးကိုစာသင်ခန်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တယ်သူလည်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့ဖြစ်နေတုန်း ကောင်မလေးကအခန်းပြုတင်းပေါက်ကနေထွက်သွားခဲ့တယ်ကောင်လေးကချက်ချင်းပြုတင်းပေါက်နားသွားပြီးရှာခဲ့ပေမဲ့ ကောင်မလေးကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး နောက်တစ်နေ့ကျောင်းမှာ ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတိုင်းအလုပ်ရှုပ်နေတဲ့ညနေဘက်ကြီးမှာမှန်တိုင်းကြီးကျရောက်လာပါတယ်ကျောင်းနားကလျှပ်စစ်တာဝိုင်တိုင်ကြီးမိုးကြိုးဖြစ်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် Azuma ဟာတာဝါတိုင်ပေါ်ရပ်နေတဲ့ ကောင်မလေကိုတွေ့လိုက်ရတယ် သေချာပါတယ်သူဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်တဲ့ကောင်မလေးပါဘဲကောင်မလေးက ဘယ်သူပေးလိုက်မှန်းမသိတဲ့တာဝန်အနေနဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်က ဝဲကြီးကို မြေပြင်ပေါ်ကဝဲကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာပါ ဒါပေမဲ့အဲ့တာဝန်က မကောင်းမှန်း Azuma ကသိနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Azuma တစ်‌ေယာက် ကောင်မလေးကိုတာဝန်ကနေဘယ်လိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလဲသူကယ်တင်နိုင်မလား ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာတော့ Translated by ShoukoEncoded by Mr.VIRUS
IMDB: 5.9/10 178 votes
GYO: Tokyo Fish Attack To celebrate their graduation from university Kaori and her two friends visit Okinawa in southern Japan forashort vacation. At the vacation house, provided by Tadashi's uncle,anumbing stench awaits the girls, and can be traced toahorrendously deformed, legged fish that Kaori kills. More and more of these creatures appear and portendahorrific change for ...
IMDB: 5.3/10 5655 votes
Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll Isabella, the daughter of the noble York family, is enrolled in an all-girls academy to be groomed intoadame worthy of nobility. However, she has given up on her future, seeing the prestigious school as nothing more thanaprison from the outside world. Her family notices her struggling in her lessons and decides to hire Violet Evergarden to ...
IMDB: 8.2/10 24551 votes
Rain in the Sunshine Schoolboy Hinata hasabig crush on his classmate Shigure, but is too shy to tell her. On the day Shigure is leaving, Hinata flies off on the wings ofabird chasing after her to tell how he feels! Review by(Oo Oo Thant) Hinata no Aoshigure ကို ဒါရိုက်တာ Hiroyasu Ishida ကရိုက်ကူးထားပြီး IMDb မှာ 5.4/10 ရထားတဲ့ Anime ကားကောင်းတစ်ကားလဲဖြစ်ပါတယ် Google ရဲ့စစ်တမ်းကောက်ချက်အရလဲ 96 % ...
IMDB: 6.0/10 45655 votes
Jin-Roh: The Wolf Brigade A member of an elite paramilitary counter-terrorism unit becomes traumatized after witnessing the suicide bombing ofayoung girl and is forced to undergo retraining. However, unbeknownst to him, he becomesakey player inadispute between rival police divisions, as he finds himself increasingly involved with the sister of the girl he saw die. Jin-roh ကိုသိ​လား????? jin-roh ဟာဆိုရင်ဂျပန်Animeအနေနဲ့အောင်မြင်ထားရုံသာမကပဲ WBကနေကိုရီးယားသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့ Live-action ...
IMDB: 6.1/10 25156 votes
Altered Carbon: Resleeved ဒီmovieကိုစၿပီးအေျခခံထားတာကေတာ့ နည္းပညာေတြတိုးတက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးကေနစတာပါ နည္းပညာေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္တိုးတက္ေနသလဲလို႔ ဆိုရင္ ကားပ်ံေတြ ပ႐ိုဂရမ္အသစ္အဆန္းေတြနဲ႔ ေျပာရရင္Ghost in the shellကၿမိဳ႕ေတာ္ေတြနဲ႔ေတာင္ ခပ္ဆင္ဆင္ပါ အဲ့ဒီအျပင္အရင္ကသိၾကတဲ့ ေသမ်ိဳးေတြလို႔ဆိုတဲ့ လူသားေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ေတြရဲ႕အသက္ေတြ႐ွည္ေအာင္ မေသေအာင္ လုပ္ေနၾကပါၿပီ ဘယ္လိုလုပ္သလဲဆိုရင္ေတာ့ လူတစ္ေယာက္ေသခါနီးၿပီဆိုရင္ အဲ့ဒီလူနဲ႔ပတ္သက္နဲ႔မွတ္ဥာဏ္ေတြ dataေတြ အားလံုးကိုchipျပားေလးတစ္ခုထဲသိုေလွာင္ထားလိုက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့လူခႏၶာကိုယ္တစ္ခုမွာ တပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ တစ္ဖန္ျပန္႐ွင္သန္ႏိုင္တာပါ အဲ့တာေတြအျပင္ဒီဇာတ္လမ္းကyakuzaေတြကို ပိုၿပီးအေျခခံထားပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအစပိုင္းမွာေတာ့ မိန္းမငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကိုyakuzaအဖြဲ႔ဝင္ လူႏွစ္ေယာက္ကလိုက္လံဖမ္းဆီးေနပါတယ္ ဒါေပမယ့္ samuraiမ်က္ႏွာဖံုးစြပ္နဲ႔လူတစ္ေယာက္ဟာ ထိုလူႏွစ္ဦးကိုခုတ္ျဖတ္သတ္ပစ္ခဲ့တယ္ ဒါေပမယ့္လည္းအဲ့ဒီဆာမူ႐ိုင္းမ်က္ႏွာဖံုးနဲ႔ လူရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း ခုနကေသသြားတဲ့လူႏွစ္ေယာက္နဲ႔ထပ္တူပါပဲ အဲ့ဒီမိန္းကေလးကိုဖမ္းဆီးခ်င္တာပါ သူ႔ကိုလိုခ်င္ေနတာအဲ့ႏွစ္ဖြဲ႔တင္မဟုတ္ပါဘူး တျခားyakuzaအဖြဲ႔ေတြကလည္းသူ႔ကိုအလို႐ွိေနပါတယ္ အဲ့ဒီသာမန္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို Yakuzaအဖြဲ႔ႀကီးေတြကဘာလို႔အသည္းအသန္လိုခ်င္ေနရတာလဲ အဲ့ဒီမိန္းကေလးမွာဘယ္လိုလွ်ိဳ႔ဝွက္ခ်က္ေတြမ်ား႐ွိလို႔လဲ.... ဇာတ္လမ္းကိုဆက္လက္႐ႈစားပါ ဒီဇာတ္လမ္းကyakuzaေတြကိုပိုၿပီးအသားေပးထားတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕အက်င့္စ႐ိုက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတာ့ေတြ႔ရမွာပါ [Unicode] ဒီmovieကိုစပြီးအခြေခံထားတာကတော့ နည်းပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံကြီးကနေစတာပါ နည်းပညာတွေဘယ်လောက်တောင်တိုးတက်နေသလဲလို့ ဆိုရင် ကားပျံတွေ ပရိုဂရမ်အသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ပြောရရင်Ghost in the shellကမြို့တော်တွေနဲ့တောင် ခပ်ဆင်ဆင်ပါ အဲ့ဒီအပြင်အရင်ကသိကြတဲ့ သေမျိုးတွေလို့ဆိုတဲ့ လူသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း သူတို့တွေရဲ့အသက်တွေရှည်အောင် မသေအောင် လုပ်နေကြပါပြီ ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုရင်တော့ လူတစ်ယောက်သေခါနီးပြီဆိုရင် အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်နဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေ dataတွေ အားလုံးကိုchipပြားလေးတစ်ခုထဲသိုလှောင်ထားလိုက်ပြီး နောက်ထပ်ကိုယ်လိုချင်တဲ့လူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုမှာ တပ်လိုက်ရုံနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်ရှင်သန်နိုင်တာပါ အဲ့တာတွေအပြင်ဒီဇာတ်လမ်းကyakuzaတွေကို ပိုပြီးအခြေခံထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစပိုင်းမှာတော့ မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ကိုyakuzaအဖွဲ့ဝင် လူနှစ်ယောက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါတယ် ဒါပေမယ့် samuraiမျက်နှာဖုံးစွပ်နဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ ထိုလူနှစ်ဦးကိုခုတ်ဖြတ်သတ်ပစ်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်လည်းအဲ့ဒီဆာမူရိုင်းမျက်နှာဖုံးနဲ့ လူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း ခုနကသေသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့ထပ်တူပါပဲ အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဖမ်းဆီးချင်တာပါ သူ့ကိုလိုချင်နေတာအဲ့နှစ်ဖွဲ့တင်မဟုတ်ပါဘူး တခြားyakuzaအဖွဲ့တွေကလည်းသူ့ကိုအလိုရှိနေပါတယ် အဲ့ဒီသာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို Yakuzaအဖွဲ့ကြီးတွေကဘာလို့အသည်းအသန်လိုချင်နေရတာလဲ အဲ့ဒီမိန်းကလေးမှာဘယ်လိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေများရှိလို့လဲ.... ဇာတ်လမ်းကိုဆက်လက်ရှုစားပါ ဒီဇာတ်လမ်းကyakuzaတွေကိုပိုပြီးအသားပေးထားတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တော်တော်များများကိုတော့တွေ့ရမှာပါ File Size : (1GB) and (539 MB) Quality : WEBRip 1080p, 720p Format…mp4 Duration…01:14:00 Genre : Animation, Crime, Action Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Kan San Encoded by Shine Bo Bo Latt
IMDB: 6.5/10 3,067 votes
Hello World 2019ထွက်သမျှထဲမှာ ကျနော့်အတွက်တော့ဒီကားအလှဆုံးဗျ ဇာတ်လမ်းလည်းမဆိုးဘူး‌ ဒါပေမယ့်လည်တော့ထွက်နိုင်တယ် ???? ဘာလို့လည်လဲမပြောခင် ဇာတ်လမ်းကိုအကျဉ်းတကာ့အကျဉ်းဆုံးပြောမယ်ဗျ ဇာတ်အိမ်ကို လက်တွေ့ကမ္ဘာနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကမ္ဘာနှစ်ခုမှာတည်ထားတယ် ကျန်တာတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ ???? လည်တာပြောပြမယ်ဗျ စပြောထားတာက လက်တွေ့ကမ္ဘာနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကမ္ဘာပဲ ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်မှာ မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာပါထပ်ပေါ်လာတယ်ဗျ အဲ့ဒီမှာကိုရှုတ်ကုန်တာ မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာအကြောင်းတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့ဘူးနော် သူကစိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမှာကို မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာတွေသွားပေါ်တာဗျ (လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာရှိမရှိမပြောသွားဘူးနော်) မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသီအိုရီတွေရှိတယ် အဲ့ဒီသီအိုရီတွေထဲကတစ်ခုကိုပြောပြမယ် မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာတစ်ခုမှာ တူညီတဲ့တည်ရှိမှုတစ်ခုဟာနှစ်ခုပြိုင်ရှိနေလို့မရဘူး ဥပမာ မောင်ဘဟာ မျဉ်းပြိုင်ကမ္ဘာပေါင်းများစွာမှာမောင်ဘပေါင်းများစွာရှိနေပေမယ့် တူညီတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုထဲမှာတော့ မောင်ဘနှစ်ယောက်ရှိနေလို့မရဘူးဗျ ပုံမှန်မဟူတ်တဲ့သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး ဒြပ်မှုန်တွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ် Black holeတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သီအိုရီထုတ်ထားတာတွေရှိတယ် အဲ့ဒီသီအိုရီတွေကို ဂျပန်animeထုံးစံအတိုင်းplotအကြမ်းကြီးတွေနဲ့ထပ်လုပ်လို့လည်ကုန်တာဗျ ဒီလောက်ပဲပြောပြတော့မယ် အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါ နားမလည်ရင်ဒီreviewတချက်ပြန်ဖတ်ပါ IMDb - 7.0/10
Saint Young Men ကဲ ratingကတော့အချဉ်မဟုတ်ဘူးနော် Imdbတို့ဘာတို့မှာတောင်ဒီလောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါကပြောစရာသိပ်လိုမယ်တော့မထင်ပါဘူး ကဲ ဘာလို့ဒီလောက်ကောင်းနေတာလဲ နည်းနည်းကျွန်တော်တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ရွှီးကြည့်တာပေါ့ အဲ နေဦး ပထမဆုံးကြိုပြီးစကားခံထားချင်တာက အခုကြည့်မှာကanimeပါ animeကိုanimeလိုပဲခံစားစေချင်ပါတယ် ဘယ်လိုဘာသာရေးကိစ္စတွေနဲ့မှမရောထွေးစေချင်ပါဘူး ပြီးတော့animeတွေကchaတွေရဲ့universeကကိုယ်တွေuniverseလိုမဟုတ်ပါဘူး အဲ့တော့အဲ့ကဟာတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့တချို့ဟာတွေမတူပါဘူးခင်ဗျ ကဲ စရွှီးပါပြီ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ အကယ်၍Jesusနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့ကကမ္ဘာကိုအလည်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ ပြီးတော့သာမန်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်အတူနေကြတယ်ဆိုရင်ရောဗျာ...အဲ့အခါကျ..... OVA 1 Mega.nz OVA2Mega.nz
IMDB: 6.8/10 570 votes
Spirited Away အင်္ဂလိပ်လိုSpirited away၊ ဂျပန်လို千と千尋の神隠し(Sen and Chihiro's Spiriting Away)ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ၂၀၀၁ခုနှစ်ထုတ် ဂျပန်ကားတွန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကျော် Studio Ghibliရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးကားတွန်းရုပ်ရှင်တွေထဲကတခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီကားဟာ Walt Disneyကနေပြန်ထုတ်တာတို့၊ ‌Oscarရတဲ့Japan Animationကားတို့တော့သိပ်အကျယ်ချဲ့ပြောမနေတော့ဘူးဗျ ဇာတ်လမ်းလေးပဲဆွေးနွေးကြည့်ရအောင် ဇာတ်ကားနာမည်ဖြစ်တဲ့ spirited awayခေါ်နတ်ဖွက်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်း ချိဟီရိုဆိုတဲ့ကလေးမလေးပရလောကမှာပိတ်မိနေပုံကိုပြသွားတာဗျ။ ဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာက မြန်မာတွေရဲ့နတ်ဖွက်တဲ့အယူအဆနဲ့လည်းနည်းနည်းကိုက်ညီမှုရှိနေတာကိုတွေ့ရတာပါ။ မြန်မာအယူဆိုရင် ညအမှောင်ပျိုးတဲ့အချိန်ကစားမက်ပြီးတူတူပုန်းတမ်းဆော့တဲ့ကလေးတွေကိုနတ်စိမ်းတွေဟာပရလောကမှာဝှက်ထားတဲ့အတွက်မိဘဆွေမျိုးတွေဆီပြန်လာလို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူမျိုးပါ။ ဒီကားမှာလည်း မင်းသမီးတို့တွေပရလောကထဲကိုမထင်မှတ်ပဲရောက်သွားတယ်။ ညလည်းမှောင်ရော ပရလောကသာသတွေရောက်လာတဲ့အပြင် ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုရေပြင်ကြီးကတားဆီးထားလို့လူ့ပြည်ပြန်လာလို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးပြသွားတယ်။ မြန်မာအယူမှာလည်း နတ်ဖွက်ခံရတဲ့ကလေးတွေကိုပရလောကသားတွေဟာနှိပ်စက်ညှင်းပန်းခိုင်းစေတာမျိုးရှိသလိုပဲ ဒီကားမှာလည်း အလုပ်မလုပ်ရင်တခုခုဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဇာတ်လမ်းလေးဆင်ထားတာကိုလည်းတွေ့မိပြန်ပါတယ်။ တခုဆန်းတာကတော့ မြန်မာအယူမှာနတ်ဖွက်ခံရတဲ့ကလေးဟာ ပြန်ရောက်လာရင်ပရလောကမှာနေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတစိုးတစိမှာမမှတ်မိဘူးဆိုပေမယ့် ဒီကားမှာတော့ မင်းသမီးအဖေနဲ့အမေပဲ မမှတ်မိတာ မင်းသမိးကတော့အကုန်မှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကြားဖူးနားဝယုံတမ်းစကားတွေပါနေတဲ့ဒီကားကိုငယ်ငယ်ကကြည့်တုန်းကဆိုရင်အသေကြောက်တာဗျ။ နောက်ပြီးတော့ဒီကားကိုကြည့်ပြီး နတ်ဖွက်ခံရတာကိုဘာလို့ရေချိုးအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရလဲဆိုပြီးတွေးမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက ဂျပန်ရိုးရာကိုထည့်ပြထားတာဗျ။ မြန်မာမှာဆိုရင်နတ်တွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးအစားအသောက်ပူဇော်သလို ဂျပန်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာလည်း နတ်တွေကိုရေမိုးချိုးတာလုပ်ဖို့ပင့်ဖိတ်တာမျိုးရှိတယ်‌ဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်ရေချိုးအိမ်ကိုအသားပေးထည့်ရိုက်ထားတာပါတဲ့။ ပြီးတော့ မြစ်စောင့်နတ်ညစ်ပတ်နေတဲ့အခန်းတို့၊ ဟခုဆိုတဲ့မြစ်ဟာ အဆောက်အဦးတွေဆောက်လို့ပျောက်ပျယ်သွားတာတွေကိုထည့်သွင်းထားတာက တွေပျက်ဆီးကုန်တာကိုပြချင်လို့ဆိုပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တချို့သုံးသပ်‌တာတွေရှိပါတယ်။ ဒီကားအကြောင်းလည်းပြောချင်တာတွေလျှောက်ပြောပြီးပြီဆိုတော့ratingလေးတွေတချက်ကြည့်လိုက်ရအောင် IMDb 8.6/10 Rotten Tomatoes 97% Metacritic 96/100ရထားပါတယ်